Mpanamboatra Clamp fampiatoana, mpamatsy - China Suspension Clamp Factory
Fampiatoana karazana J-hook
Ny clamp fampiatoana dia natao ho an'ny fametrahana sy fampiatoana ireo tariby efatra miorin-tena manohana tena LV-ABC amin'ny bao na rindrina. • Ny fametahana dia vita amin'ny vy milentika sy fitaovana mahatohitra toetr'andro • apetaka amin'ny volo loha. Ny clamp dia azo apetraka mora tsy misy fahasimbana amin'ny insulation tariby • Tsy misy faritra malalaka • Standard: EN 50483-2 Catalog No. Mpitondra mahay JSC-1 4 × 16 ~ 35mm2 JSC-2 4 × 50 ~ 120mm2 JSC-3 4 × 50 ~ 70mm2 ...
clamp fampiatoana ho an'ny tariby ABC
XJG andian-dahatsoratra dia mety ho an'ny herinaratra herinaratra fampiatoana insulation conducteur, manome karazana Hook, 、 karazana hinge sy karazana fanondranana ho an'ny mpampiasa。
NYLON-fampiatoana-clamp ho an'ny tariby ABC
Ny fametahana 1A 1B fampiatoana dia natao hampiatoana ny tariby LV-ABC manohana azy amin'ny tsato-kazo miaraka amin'ilay mpitondra hafatra tsy miandany. Izahay dia mitarika mpanamboatra NFC Type Suspension Clamp ary ny fizotry ny famokarana dia ny famolahana injection, ny fitaovana ampiasaina dia UV Resistant Glass Feno nylon, tombony azo avy amin'ny vokatra satria vita amin'ny plastika dia feno insulated ary koa tsy manana faritra malalaka , Ny tariby dia azo alaina amin'ny alàlan'ny fanitsiana leverin'ny karazana push. Introduc ...
XGU series trunnion type malefaka vy fampiatoana clamp / herinaratra fantsona clamp no tena ampiasaina amin'ny overhead herinaratra, mampiato mpampita amin'ny insulator na tselatra conducteur amin'ny jiro tilikambo amin'ny fampifandraisana fittings. Izy io dia vita amin'ny firaka aliminioma, miaraka amin'ny fatiantoka minium an'ny hysteresis andriamby sy ny ony eddy ary koa ny lanjany maivana sy fametrahana mora. Nahazo ny mason-tsivana amin'ny fampihenana angovo sy ny fihenan'ny fanjifana amin'ny fanarenana ny fanjakan'ny fanjakana sinoa izy. Rahoviana ...
Ny teboka mihantona avo roa heny mialoha ny fametahana fampiatoana clamp Ny vatan'ny Clamp sy ny mpiambina dia vita amin'ny firaka aliminioma Ny Cotter-pin dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ny faritra hafa kosa dia milentika mafana. (1) Ny zoro mihoampampana amin'ny clamp fampiatoana dia tsy latsaky ny 25 °. (2) Ny tariben'ny curvature an'ny tadin'ny tariby mihantona dia tsy tokony ho latsaky ny in-8 amin'ny savaivon'ny tariby napetraka. (3) Ny hery mitazona ny tadin'ny tariby fampiatoana amin'ny tariby samihafa sy ny isan-jaton'ny isa te ...
Clamp fampiatoana type karazana kitapo） Ny clip tariby fampiatoana dia ampiasaina matetika amin'ny tsipika herinaratra na fanindronana. Ny tariby sy ny mpampita taratra dia mihantona amin'ny tadin'ny insulator na mihantona amin'ny tilikambo amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny vy vy ny conducteur taratra. Vita amin'ny karazana fitaovana roa izy io: firaka vy sy aliminioma. tsy latsaky ny 25, ary ny tadin'ny curvature dia tsy tokony ho latsaky ny valo heny ny savaivon'ny inst ...
fampiatoana clamp CGH
Fampiatoana fampiatoana （karazana envolope） XGH andiam-piatoana fampiatoana andian-tsarimihetsika XGH dia ampiasaina hampifandraisana ireo mpitantana amin'ny insulator. Ny vatan'ny Clamp sy ny mpiambina dia vita amin'ny firaka aliminioma ny Cotter-pin dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ny faritra hafa kosa dia milentika mafana. Catalog No. No. Conductor Dia. （Mm） Fepetra lehibe (mm) Enti-miasa tsy mahomby (kN) Lanja (kg) HCMRL XGHICGH) -2 5.1-12.5 52.5 25 16 18.0 166 40 1.0 XGHICGH) -3 12.4-17 50 .. .